Antenimieram-pirenena: Naverina ho Sekretera jeneraly i Randriamahafanjary Calvin
lundi, 12 août 2019 13:17
Nisokatra androany 12 aogositra 2019 atoandro ny fivoriana tsy ara-potoanan’ny Antenimieram-pirenena, handinihana ny fanitsiana ny fitsipika anatin’ny Antenimieram-pirenena, ny fanitsiana ny lalàna 2011-013 mikasina ny fanoherana sy ny antoko mpanohitra, ary fanoloran’ny praiminisitra ny Politika ankapoben’ny fanjakana.
Fa nanamarika ity fotoam-panokafana ny fivoriana androany ity, noho izy tranga tsy mpiseho eny Tsimbazaza, ny fanolorana ampahibemaso nanoloana ireo solontenan’ny andrimpanjakana notarihin’ny praiminisitra, ireo solombavambahoaka, ary ny mpiasan’ny Antenimieram-pirenena an-dRandriamahafanjary Andriamitarijato Calvin, Sekretera jeneraly vaovaon’ny Antenimieram-pirenena.
Mpiasan’ny Antenimieram-pirenena ary efa nitana ny andraikitry ny Sekretera jeneraly nandritra ny roapolo taona tao Tsimbazaza i Randriamahafanjary Calvin. Nosoloina an’i Befourouack William (niasa roa taona) avy eo Ratsimba Andrianaivo Mamy (niasa roa taona) izy, nandritra ny naha filohan’ny Antenimieram-pirenena an’i Rakotomamonjy Jean Max. Nomena andraikitra « Inspecteur Général de l’Assemblée Nationale » i Randriamahafanjary Calvin nandritra ny fe-potoana niasan’ny Antenimieram-pirenena farany.
Nampifamadihana ny andraikiny sy Ratsimba Andrianaivo Mamy ka ity farany indray no notendren’ny filohan’ny Antenimieram-pirenena Razanamahasoa Christine ho « Inspecteur Général de l’Assemblée Nationale ». Tsy nampitovy hevitra ireo samy mpikambana tao amin’ny Birao Maharitry ny Antenimieram-pirenena io fanampahan-keivtra io. Na izany aza, tontosa tamin’ny alakamisy 8 aogositra 2019 ny fifamindram-pahefana teo amin’ny roa tonta.
Mpiasan’ny Antenimieram-pirenena, efa « Directeur de la législation » nandritra ny 18 taona, mpisolotoerana ny Sekretera jeneralin’ny Antenimieram-pirenena amin’ny fotoana tsy maha eo an-toerana an’ity farany i Ratsimba Andrianaivo Mamy, nialoha ny nanendren’i Rakotomamonjy Jean azy ho Sekretera jeneralin’ny Antenimieram-pirenena nandimby toerana an’i Befourouack William.